फेसबुक लाइभमा यस्तो भनेपछि, ट्रोलको सिकार बनिन् रीमा विश्वकर्मा – Media Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/फेसबुक लाइभमा यस्तो भनेपछि, ट्रोलको सिकार बनिन् रीमा विश्वकर्मा
फेसबुक लाइभमा यस्तो भनेपछि, ट्रोलको सिकार बनिन् रीमा विश्वकर्मा
काठमाडौं / लकडाउनका कारण आम सर्वसाधारणझैँ नेपाली सेलिब्रेटीहरु पनि घरभित्रै नजरबन्द हुनुपरेको छ । वर्षमा विरलै घरमा बस्न पाउने कलाकारहरु अहिले परिवारसँग बसेर समय विताइरहेका छन् । चाड-पर्वबाहेक कमै कलाकारहरुले भान्सामा मिठामसिना परिकार पकाउन र सिक्न पाएका थिए । यो लकडाउनको समयमा भने धेरै कलाकारहरु कुकिङमा रमाइरहेका छन् ।ति नै सुःख सुविधामा हुर्किएका व्यक्तिलाई पनि भान्साका आधारभूत कुराहरु भने थाहा हुन्छ । जस्तैः चिया बनाउन, भात पकाउन, तरकारी काट्नलगायत । सम्भवतः हामी कोही यस्ता नेपाली छैनौं, जो कहिल्यै भान्सा नछिरेका हौं र माथि उल्लेखित भान्साका आधारभूत कुराहरु नबनाएका हौं । तर, के तपाईंहरुले कहिल्यै कालो चिया समेत उमाल्न नआउने व्यक्ति भेट्नु भएको छ ? सम्भवतः छैन ।
तर, आज हामी तपाईंहरुलाई कालो चिया समेत उमाल्न नआउने एक नेपाली सेलिब्रेटी चिनाउँदैछौं । लकडाउनअघिसम्म अभिनेत्री रीमा विश्वकर्मालाई कालो चिया समेत बनाउन आउँदैन थियो रे ! यो उनैले भनेको कुरा हो । आफ्ना प्रशंसकहरुसँग सामाजिक सञ्जालमा लाइभ कुराकानी गर्ने क्रममा उनले बल्ल आफूले कालो चिया बनाउन सिकेको बताएकी हुन् ।काम व्यस्तताका कारण भान्सा छिर्ने समय नहुने भएकाले रीमालाई कालो चिया समेत बनाउन नआएको रहेछ । उनले भनेकी छन्, ‘लकडाउनको समयमा बल्ल कालो चिया बनाउन सिकेँ । मसँग भान्साको काम गर्ने समय हुँदैन । मेरो कामको प्रकृति नै फरक छ । अब बल्ल पकाउन सिक्दैछु ।’ तर, उनको यो कुरा अहिले सामाजिक सञ्जालमा मजाकको विषय बनेको छ ।
लकडाउनको समयमा आफूले कालो चिया बनाउन सिकेकोमा खुसी व्यक्त गरेकी रीमालाई उनका प्रशंसकहरुले अर्को लकडाउनमा भात पकाउन सिक्न सुझाव दिएका छन् । त्यस्तै, एक दर्शकले उनको कुरालाई व्यंग्य गर्दै लेखेका छन्, ‘पानी तताउन पनि सिक्नु भो कि ?’ हुन पनि, कालो चिया बनाउनु भनेको पानी तताउनुभन्दा भिन्न छैन । त्यसमा चिनी र चियापत्ती मात्र थप्ने हो ।अभिनेत्री रीमा विश्वकर्मा सम्पन्न मुलुकमा जन्मे-हुर्केकी पनि होइनन् । नेपालको बर्दियाको गुलरिया उनको जन्म भएको थियो । बर्दिया जिल्ला नेपालको पश्चिम क्षेत्रको अन्न भण्डारको रूपमा पनि चिनिन्छ । अर्थात्, यहाँ बसोबास गर्ने मानिसहरुको प्रमुख पेशा नै कृषि हो । यो क्षेत्रमा जन्मिएको व्यक्तिले कालो चिया समेत बनाउन आउँदैन ।
पत्नी राधिकासँगै प्रधानमन्त्री ओली बामदेवको घरमा
तीन दिनको शिशुमा कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि
आइसियू नपाएर टिचिङ अस्पतालका लेखाअधिकृतको निधन
सर्पले प्राथना गर्ने यो अचम्मको मन्दिर, जहाँ १० वजे आएर ३ वजे फर्किन्छ…..!